Case Mharidzo - Shijiazhuang Yiling Hospital
Case nhamba imwe:
Mr Xiao, makore 67 okuberekwa, chikuru kenza chiropa, AFP1000u / Rine mamiririta, abdominal CT: hofori kenza chiropa, pamwe zvatichiri chimiro, mukanyiwa yavapo zvakanaka muduku vena cava uye portal tsinga, uye nechisimba chiropa Kamudzira pamwe subcapsular effusion, cirrhosis, portal tsinga achiwedzera , cholecystitis, abudise vakapoteredza gallbladder, mumwe chishongedzo chirwatata. Kunopiwa interventional embolization + Chinese mushonga uye dzimwe Integrated kurapa. Zvazvakaita pachena.
Case nhamba mbiri:
Fan Yusuo, munhurume, 57, kurudyi kenza yemapapu, zvokurwara pamusoro squamous muchitokisi carcinoma, bundu encroaches ari pulmonary tsinga, uye akarasikirwa mukana oparesheni, radiotherapy anonziwo contraindicated.
Ipai iye Integrated kurapwa, chikamu kurapwa kunosanganisira: mushonga + Interventional + hyperthermia.
Zvino efficacy Kukoshesa CR (zvizere kuregererwa), kusvikira zvino kurarama anopfuura 3 years, kurarama zvakanaka.
Guillain-Pazvibato zvechizarira urwere
Wang Moumou, munhurume, ane makore 54, Shijiazhuang. Akanga akabvuma kuchipatara muna July 2010 nemhaka chiveve panguva wamativi ake uye kushaya simba kuti gore anopfuura chete.
Muna July 2009, murwere chema chiveve wake zvigunwe pashure anoridza mhepo-kutonhodza rake kunyunyuta, uye nokukurumidza kwakange chiveve muruoko zvose minwe, yakanga Haungaenzaniswi. September kusvika kumaodzanyemba iri basa rwendo, paiva fivha, asingaurayiwi kurapwa fivha shure, ruoko-rutsoka chiveve zviratidzo zvishoma nezvishoma kune proximal kukura, uye achiperekedzwa neutera, achifamba unogamuchirwa, kuchipatara dzematunhu kutarisa dehenya uye remuromo vertebrae hapana kunze, kuti rugare kuchipatara tarisa The lumbar nomuzongoza yakaratidza "lumbar 2-3 intraspinal neurofibroma", uye myoelectricity vakaratidza "distal tsinga abnormality ari distal tsandanyama." Muna November, akaenda Tiantan Hospital kuita tsinga mumuhara bundu resection.
Postoperative uremu kwakanga 20 jins, chiveve mu wamativi kuwedzera zvishoma nezvishoma, achifamba kusagadzikana, zvakajairika weti, kufenda nyonganyonga, uye paiva nemvura pakati chikosoro, binocular chiratidzo navaduku chinjikira nystagmus, February 2010 kuchipatara dzematunhu, Check myoelectricity kunoratidza "symmetry , distal injini axons, myelin maronda, kutsinga dzinouya tsinga zvachose zvakakuvadza ", bilateral zvakajairika evoked potentials, zvemamiriro brainstem-auditory evoked zvinogona, vakachena matauriro audiometry zvinoratidza binaural tsinga Sexual spasm, pathological" chirwere neuropathy "ari kuruboshwe sural etsinga biopsy, akaonekwa se" Green-Ballie chirwere ", Ipai guru-dose wegamma Mabumba, kuderedza hormone zvokudya tsinga, kuvandudza kuparadzirwa kurapwa, kubvisa zviratidzo phlegm, kuderedza chiveve mune maoko nemakumbo, pakurwara uremu, uye famba panze. Mushure zvinoerera, mamiriro ezvinhu akanga pfupi kugadzikana, zviratidzo chiveve mativi wamativi vachiri pachena, neutera rakanga pazasi mabvi, kufamba kwakanga isina, uye zvakanga zvakaoma kuti kumira nameso akavhara kana achifamba usiku, saka ndakasvika kuchipatara yedu kurapwa.
Pashure 4 mavhiki 'kunorapwa muchipatara kwedu: Zviratidzo chiveve pakupera maoko nemakumbo vawedzerwe, uye flexion norutsoka ndiyo giredhi 4th, uye kufamba akatsiga. Tevera-up: saka kure hapana dzokororo, zvakajairika upenyu uye basa. Nemhaka yoruzivo nzvimbo, hatigoni kuratidza zvakawanda kurapa edu. Kana uchida kuziva marapiro, unogona nesu achishandisa tsamba inotumirwa neindaneti.
Unogona kurayira Chinese mushonga kurapwa kunze?
Zvakajeka kutaura, nyore Chinese mishonga inoonekwa ose nyika, chero bedzi pane Chinese mushonga chitoro. Zvisinei, kuti hurongwa Chinese mushonga mishonga haisi kuwanikwa kumwe. Sezvo zvichacheneswa zvichienderana yako chaiyo chirwere ezvinhu. Uye ndokusaka chatichakumbira yenyu dzokurapwa mishumo panguva kukurukurirana, saka kuti tinogona kuongorora mamiriro ako mashoko uye ipapo kuti kurapwa kuronga.
Chii mabasa sei Chinese mushonga vane?
Munguva yose kurapa, Chinese mishonga kutamba zvinotevera kuchirapa Migumisiro:
1. Kuparidzira midziyo ropa rose pamusoro muviri
2. Kuwedzera ropa kuyerera muitsvo uye kuvandudza ropa kutenderera
3. zvinovaka ropa uye achibvisa stasis
4. Kupa zvakakwana zvinovaka muviri uye okisijeni kuti itsvo
5. Kuwedzera vaizviita hunorapa mano wakakanganiswa itsvo masero
6. Kusimbisa Qi, imwe inokosha simba, mumuviri
7. Kuvandudza itsvo filtration zvazvingava
Muna 2 weeks kurapwa, African cheshuga murwere Akagamuchira Integrated kurapa zvinhu. All tsvimbo vanofara kuona iye ari nani.
TCM kurapwa michina, TCM decoction, medicated shanu-chaikosha kugeza, zvakafanira yokumadokero mushonga ....
Pamwe unogona kuona Massage kwese, Zvisinei, chii isu ndiye Tuina, iro rinoshanda riri yomukati zvomukati, yomukati hurongwa, kwete chete masaja pamusoro ganda kana mhasuro; pamwe unogona kuona Acupuncture kwese, zvisinei, acupoint ose, angled ose, ose kudzika tsono kushanda; pamwe unogona kuona medicated kugeza kwese, zvisinei, tinoshandisa shanu-chaikosha dzidziso kutungamirira, kwakavakirwa zvakananga muviri ezvinhu, saka rubatsiro murwere pachake.